मन्थली मा वि.मा काण्डै काण्ड, काण्डमा मुछिने मन्थली नगरका कर्मचारी पनि - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाज ∕ मन्थली मा वि.मा काण्डै काण्ड, काण्डमा मुछिने मन्थली नगरका कर्मचारी पनि
Sindhu Khabar मंगलबार, २०७८ भदौ २९ / १५:४६
वि.व्य.स. गठन सहयोग समितिले सार्वजनिक गरेको अभिभावकको नामावलीमा अभिभावकको संख्या १ हजार ६ सय ८९ जना थियो । तर २०७६/१०/०८ मा बसेको अभिभावक भेलामा उपस्थित अभिभावकको संख्या ४८३ मात्र रहेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि गणपूरक संख्या नपुगिकन भेला र निर्वाचन गरेको देखिन आउँछ । त्यस बाहेक उम्मेदवार दर्ता बाहेकका निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु कार्यतालिका बमोजिम सञ्चालन गरेको समेत देखिदैन । वि.व्य.स. छनौट सहजिकरण समितिको वैंठकमा समेत सवै उम्मेदवार उपस्थित भएका थिएनन् । मनोनयन दर्ता गराउने को मनोनयन नै फिर्ता नलिई मनोमानी ढंगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिने लगायतका कामको आधारलाई हेर्ने हो भने वर्तमान ब्यवस्थापन समिति अवैधानिक देखिन आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार सम्झौता रकम रु १ करोड, ७४ लाख, ९४ हजार २ सय ७० थियो र कार्य सम्पन्न मिति २०७८/०३/३१ सम्म थियो । सम्झौता अनुसार नमुना विद्यालय कार्यक्रमबाट १ करोड ५० लाख र सम्बन्धित विद्यालयको रु २४ लाख ९४ हजार २ सय ७० गरी जम्मा १ करोड ७४ लाख ९४ हजार २ सय ७० को डिजाइन, लागत अनुमान अनुसारको कार्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर विद्यालयले पुन दोस्रो पटक सोही आयोजनाको लागत अनुमान ग्रयाब ईन्जिनियरिङ प्रा.लि. बाट गरायो र सोको लागत रु ७८ लाख २० हजार १ सय २ पैसा ९४ लाई पनि प्र.अ. टंकप्रसाद दाहालले स्वीकृत गरे । सोही डिजाइन इस्टिमेट अनुसार निर्माण कार्य गर्ने भनी उपसमितिले निर्णय पनि ग¥यो ।
निर्माणाधीन छात्रावास भवनको दोस्रो पटक तयार गरिएको नक्सा बमोजिम एक तला भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर उक्त शीर्षकको रकम मन्थली माध्यमिक विद्यालयले भवन निर्माण नै नसकी निणयका आधारमा आफ्नो खातामा निकासा गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।